Fiarandalamby Fiaramanidina Shina Lehibe, Drm Pwm 5000Ma, Slim Switch Manufacturer Manufacturer and Supplier
Description:Linear High Bay Driver,Driver Pwm 5000Ma,Slim Switch Power,,,
Home > Products > Vehivavy mpamily fiara fitaterana > LED Linear High Bay Lights Driver
Ny vokatra avy amin'ny LED Linear High Bay Lights Driver , mpanofana manokana avy any Shina, Linear High Bay Driver , Driver Pwm 5000Ma mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Slim Switch Power R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
240W Linear Luminaire LED Treiber  Contact Now
160W IP nomena ligne linear linear  Contact Now
Ny IP Rated LED Lampea fanondron-jiro dia mihatra  Contact Now
UL Linear High Bay Licht LED LED  Contact Now
240W Linear Luminaire LED Treiber
Description: Ny seranana FD-160H-xxxB dia miasa amin'ny alàlan'ny sariohatra 90 ~ 305 Vac. Ireo sokajy ireo dia hanome hatramin'ny 5.7A ny famoam-pitaovana ary ny 50V fara fahakeliny ho an'ny herinaratra fara-tampony 240W. Natao...
160W IP nomena ligne linear linear
Description: Ny seranana FD-160H-xxxB dia miasa amin'ny alàlan'ny sariohatra 90 ~ 305 Vac. Ireo sokajy ireo dia hanome ny 3,8A amin'ny famoam-peo ary ny laharana ambony 54V ho an'ny output power 160W. Natao hahomby sy azo itokisana...
Description: Ny seranana FD-100H-xxxB dia miasa amin'ny sariohatra 90 ~ 305 Vac. Ireo sokajy ireo dia hanome tohatra 2.4A amin'ny famoahana herinaratra ary ny laharana ambony indrindra amin'ny 54 V ho an'ny herinaratra avo 100...
Ny IP Rated LED Lampea fanondron-jiro dia mihatra
UL Linear High Bay Licht LED LED
Vidin'ny singa: USD 18.5 / Piece/Pieces
Linear High Bay Driver Series LED Dimmable Driver mitana ny fahombiazany sy ny androm-piainany, 5 taona an-tariby. Ny andian-dalambe mpanome baolina ambony dia vahaolana tonga lafatra ho an'ny fiara fitaterana an-jaridaina, fanamafisana ny...
Vidin'ny singa: USD 14 / Piece/Pieces
Details FD-100H-054A, Toro-alim-be Aluminio iray natao ho an'ny jiro mitazona ambony. Flicker maimaim-poana 0-10V mamono LED Driver 100W 100-4000mA, UL, CB, CE mifanaraka, vokatra mitatao lava ny IP67 fanamontsenana. Ireo fitaovana dia mety...
Shina LED Linear High Bay Lights Driver mpamatsy
Fampiharana: indrindra ho an'ny hazavana trondro mitondra, AC100-277V / 347V, 1-1.5A ny famoahana baoritra, Fefy fandefasana vy, fanohanana 0-10V / PWM / RX mamim-bidy, High efficiency sy PF valanjavana, Mandray ny certificated UL / FCC / Class P ho an'ny tsena Amerika Avaratra.